WeChat အခမဲ့ | အန်းဒရွိုက်သည် APK ကိုဒေါင်းလုပ် (နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း)
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » WeChat
WeChat APK ကို
"အများကြီးပိုကောင်းတဲ့, ပိုပြီးလူကြိုက်များ, ပိုပြီးအသုံးပြုသူ-friendly" - USA Today
"လူတိုင်းကအချို့သောအသုံးပြုမှုရှိကြောင်းအလုံအလောက်စွယ်စုံ, မည်သူမဆိုအသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုလုံလောက်စွာရိုးရှင်းသော" - WiredWeChat တစ်စာပို့ခြင်းဖြစ်ပြီးသင်အလွယ်တကူနိုင်ငံများတလွှားမိသားစု & သူငယ်ချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြု app ကိုခေါ်ဆိုခြင်း။ ဒါဟာစာသားကိုခြင်း (SMS / MMS) ကို, အသံနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, ခဏ, ဓာတ်ပုံကိုဝေမျှခြင်း, နှင့်ဂိမ်းများများအတွက် All-In-One ဆက်သွယ်ရေး app ကိုဖွင့်။
လူအပေါင်းတို့သည် WeChat App ကိုအင်္ဂါရပ်တွေကိုပြသသောငါတို့အေးမြဗီဒီယိုကိုထုတ်စစ်ဆေး
NEW •! ခေါ်ဆိုမှုများ OUT WeChat: (သာအချို့သောဒေသများအတွက်) အနိမ့်မှုနှုန်းမှာကမ္ဘာအဝှမ်းမှကုန်းမြေနယ်နိမိတ်နှင့်မိုဘိုင်းမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ပါ။
• multimedia messaging: ဗီဒီယို, ပုံရိပ်, စာသား, အသံမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ။
•အုပ်စုချတ် & ခေါ်ဆို: 500 လူတွေမှတက်နှင့်အတူအုပ်စုချတ် Create နှင့်အုပ်စုတစ်စုကိုဗီဒီယိုကလူ9မှတက်တောင်းဆိုထားသည်။
•အခမဲ့အသံ & VIDEO ခေါ်ဆို: ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုမှမြင့်မားသောအရည်အသွေးအခမဲ့ဖုန်းခေါ်။
•စတစ်ကာများပြခန်း: သင်၏အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းနှင့်ရုပ်ရှင်အချို့မှသင်၏ခံစားချက်များကိုဖော်ပြစတစ်ကာများကာတွန်းအခမဲ့, ပျော်စရာရာပေါင်းများစွာ။
• MOMENTS: သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဓါတ်ပုံကိုစီးပေါ်တွင်သင်၏အကောင်းဆုံးအချိန်လေးမျှဝေပါ။
•ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုံခြုံမှု: သင်သင့် privacy ထိန်းချုပ်၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုပေးသည် WeChat ။ ဒါဟာယုံကြည်မှုကိုအားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ကိုသာ messaging app ဖြစ်ပါတယ်။
•အစည်းအဝေးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်: အခြားသူများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ "အနီးတဝိုက်ရှိပြည်သူ့" နှင့် "Shake" "မိတ်ဆွေ Radar" ကိုသုံးပါ။
•လက်ရှိအချိန် LOCATION: မယ့်အစားသင်ဘယ်မှာပဲ Real-time တည်နေရာခွဲဝေမှုကိုသုံးပါ, အခြားသူများအားပြောပြရန်ရှိခြင်း၏။
•ကို LANGUAGE အတွက်အထောက်အပံ့: 20 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်ဒေသတွင်းနှင့်မည်သည့်ဘာသာစကားမှမက်ဆေ့ခ်ျဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါ။
•နှင့်ပိုပြီး: Desktop ကို app ကိုမိမိစိတ်ကြိုက်နောက်ခံပုံများ, ထုံးစံအကြောင်းကြားစာများနှင့်တရားဝင် Accounts ကို။
WeChat V6.5.7 အတွက်နယူးကဘာလဲ
39.23 ကို MB
ကို Tencent WeChat
ဇူလိုင်လ 9, 2019 မှာ 4: 16 ညနေ
ငါ WeChat ကိုချစ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2017 မှာ 10: 59 ညနေ
nsavyimana ဩဗဒေ says:
သြဂုတ်လ 10, 2017 မှာ 6: 32 ညနေ
ငါသည်ငါ့ WeChat ကိုချစ်
ရှင်ပေါလု D.Wornyan says:
အောက်တိုဘာလ 24, 2016 မှာ 2: 23 ညနေ
ငါ WeChat ကိုချစ်။
Mao shuang says:
မတ်လ 19, 2016 မှာ 7: 16 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2016 မှာ 3: 39 ညနေ
johari muzrin says:
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2016 မှာ 9: 38 ညနေ
ယင်း၏ကြောက်မက်ဘွယ်ခဲ့ WeChat app ကို
စက်တင်ဘာလ 28, 2018 မှာ 7: 59 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 10, 2016 မှာ 8: 24 ညနေ
ကိုယ်သိပ် WeChat ကိုချစ်
ဇန်နဝါရီလ 5, 2016 မှာ 4: 59 ညနေ
Plz အချို့သောတဦးတည်းကိုယ်ကကြိုးစားပြီး hav becos ငါ၏အ BlackBerry ကို Z10 အပေါ် WeChat ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုငါ့ကိုဖျောပွနိုငျအကြိမ်ပေါင်းများစွာသည်နှင့် Plz ဘုရားသခငျသညျကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ငါ့ကိုကူညီဖို့လုပ်ဆောင်နေသည်မဟုတ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 7, 2015 မှာ 10: 32 နံနက်
အောက်တိုဘာလ 16, 2015 မှာ 6: 07 ညနေ
ကိုယ့် WeChat ချင်
ဇွန်လ 2, 2015 မှာ 12: 39 ညနေ
တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးမှာ google ကိုတိုစေ link ကိုမပေးကြောင်း link တစ်ခု post နိုင်မလဲ? ငါတရုတ်ပြည်တွင်ရယ်နဲ့ကျွန်မမှာ google ကိုမသုံးလို့ရပါတယ်, ငါ့ဖုန်းပေါ်ရှိ samsung စတိုးဆိုင်အားလုံးတရုတ်, ကျေးဇူးတင်စကားအတွက်ပါ!
ဇွန်လ 6, 2015 မှာ 1: 12 နံနက်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 30, 2015 မှာ 5: 46 ညနေ
ဧပြီလ 15, 2015 မှာ 9: 12 ညနေ
ငါ samsung လှိုင်း y ကို အသုံးပြု. နေပါတယ်။ bada 2.0 ဗားရှင်း။ မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ GT-s5380k ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကျနော်တို့ chat ကိုသုံးနိုင်သည်
မတ်လ 30, 2015 မှာ 1: 48 ညနေ
apk.why နှင့်အတူဒီ app ကို install လုပ်မရနိုင်သလဲ
SHYAM BABU MODANWAL says:
မတ်လ 21, 2015 မှာ 8: 50 နံနက်
မတ်လ 3, 2015 မှာ 3: 52 ညနေ
ဟေ့။ IAM WeChat ကို အသုံးပြု. သော်လည်းမသည်ငါ့အဆွေခင်ပွန်းတို့သည်ငါ့ကိုကူညီ calling.plz
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2015 မှာ 3: 33 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 13, 2015 မှာ 12: 51 ညနေ
ကမ်းလှမ်းမှုအားသွင်းဘို့ကောင်းတဲ့ app ကိုပေးနေကြတယ်
ဇန်နဝါရီလ 14, 2015 မှာ 7: 00 ညနေ
ဇန်နဝါရီလ 6, 2015 မှာ 10: 17 နံနက်
ဟေးကောင်းသောနံနက်ဈကျွန်တော်သစ်ကို verison chat ကိုသုံးပါနေပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2014 မှာ 8: 18 နံနက်
ငါသည်ငါ့ WeChat အများဆုံးဗီဒီယိုကို colling ဖြစ်ပါတယ် Love